दुर्गेश थापाले किन लुकाए श्रीमती ? छोरा जन्मिएपछि आँखाभरि आँशु बोकी खोले सबै वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्) – Namaste Host
दुर्गेश थापाले किन लुकाए श्रीमती ? छोरा जन्मिएपछि आँखाभरि आँशु बोकी खोले सबै वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)
January 25, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on दुर्गेश थापाले किन लुकाए श्रीमती ? छोरा जन्मिएपछि आँखाभरि आँशु बोकी खोले सबै वास्तविकता (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापाको विवाहको चर्चा खासै भएको थिएन । उनको प्रेमको भने एक पटक चर्चा भएको थियो । उनले प्रेमिकाको जन्मदिनमा निकै भावुक भावना ब्यक्त गरेर शुभकामना दिएका थिए । त्यती बेला नै उनको प्रेमिकाको बारेमा सार्वजनिक भएको थियो ।
तर उनले एक वर्ष अघि नै विवाह गरिसकेका रहेछन् । त्यो कुराको खासै चर्चा भएन । तर अहिले भने उनी बुवा बनिसकेपछि त्यो कुरा लुकाउन नसकेको बताएका छन् । धेरैलाई विवाह वारे जानकारी समेत नदिएका दुर्गेश छोराको वुवा बनेका छन् ।
आफूलाई पुत्र लाभ भएको कुरा उनले फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ‘नयाँ मान्छेलाइ सुनौलो संसारमा स्वागत छ’ भन्दै फेसबुकमा लेखे पछि सबैले थाहा पाएका छन् ।
करिब एक बर्षअघि बिवाह बन्धनमा बाँधिएका थापाको बिवाहको चर्चा भएको थिएन । प्राचि लामासंग उनी एक बर्षअघि नै बिवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए । दुर्गेशकी पत्नी प्राचिले ह्याम्प अस्पतालमा पुत्रलाई जन्म दिएकी हुन् । विवाह लुकाएका दुर्गेशले किन बुवा बनेको खबर लुकाउन सकेनन् । त्यसबारे भने यो भिडियोमा उनले खुलाएका छन् । उनले विवाहको कुरा किन सार्वजनिक गरेनन् भन्ने कुरा पनि खुलाएका छन् । उनले छोरा काखमा राखेपछि आँखा भरिएको र त्यो खुसी लुकाउन नसकेको बताएका छन् ।
नारायणी काण्डः सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन भन्दै जेठानीले खोलिन् सबै वास्तविक कुरा
म असफल हुन्छु तर देशलाई असफल हुन दिन्नँ : प्रधानमन्त्री
कल्पना दाहाल र अलिफ खान बिचको यो एकदमै रमाइलो टिकटक (हेर्नुस् भिडियो)
February 14, 2021 Bijay Lama
दुबै हात छैनन् तर हात हुनेहरु भन्दा बढि काम गर्छिन् ,यस्तोसम्म गर्न सक्छिन् (हेर्नुस् भिडियो )
May 4, 2021 Bijay Lama
धनी बन्ने इच्छा छ ? ध’र्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० ग’ल्ती